Colt Indianapolis | Martech Zone
Fraịde a, enwere m nsọpụrụ ịga nzukọ na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị amaara nke ọma na ndị isi ụlọ ọrụ mpaghara ka ha na Colts rụ ọrụ na mbọ ha na-aga n'ihu "Mee ya ka ọ bụrụ Nkeonwe" ya na ndị na-akwado ha. Nke a bụ nzukọ dị egwu ma nwee nkwanye ugwu m niile. Ha na-eji akụ niile ha nwere ike ijide iji meziwanye mmekọrịta ha na ndị Fans ha, ma weta ha nso nzukọ ahụ dịka ha nwere ike. Kama ịbanye n'ime igwe na-akpata ego, ahụrụ m n'ezie ndị Colts ka ọ bụrụ "Otu America" ​​n'ihi okwukwe ha nwere na nzukọ ahụ, yana ekele maka ndị Fans ndị rụsiri ọrụ ike.
N'ịga n'ihu, mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ iji nyere aka jikọta CRM ha, Weebụ, Nchịkọta Weebụ, Email, eCommerce, na ikekwe sistemụ tiketi ka ndị Colts nwee ike ịmụtakwu banyere onye ọ bụla na-akwado ya, gwa ha okwu n'onwe ha , ma nye ha ohere ịgbanye otu ọkacha mmasị ha dịka ha na-enwetụbeghị mbụ.
Tags: AnalyticsCRMecommerceemailIndianapolis nwamee ya n’onwe yanflỊnye tiketi